Zimbabwe Crisis News
"Zimbabwe Crisis" News
Videos for "Zimbabwe Crisis"
Jubilation in Zimbabwe as Mugabe steps down 01:23
Robert Mugabe resigns as Zimbabwe's president a week after the army and his former political allies moved against him, ending four decades of rule by a man who turned from independence hero to..
Mugabe resignation deadline passes as impeachment looms 01:41
A Monday deadline imposed on Zimbabwe President Robert Mugabe to resign by his own ruling party passes with no word from the leader, setting up for formal impeachment proceedings in parliament. Matthew..
Robert Mugabe defies expectations as he vows to stay on as Zimbabwe president 00:36
Zimbabwe's President Robert Mugabe defied expectations he would resign on Sunday (19 November), pledging to preside over a ZANU-PF congress next month even though the ruling party had removed him as..
Zimbabwe Crisis: Mugabe confined as army seizes power 01:40
Zimbabwe crisis: what next? 01:53
As Zimbabwe went through what looked like a military coup, news that Robert Mugabe was alright but confined at home came from his South African counterpart, President Jacob Zuma. Why the involvement?..
Zimbabwe's anticipated political transition is a complicated process with no obvious answers, but here are some possibilities.
Zimbabwe crisis deepens as president faces threat of impeachment and more protests
Zimbabwe - live updates: Robert Mugabe likely to be impeached after failing to announce resignation
Zimbabwe crisis: Debunking rumours and fake photos
Zimbabwe crisis: 'There's a feeling people want to celebrate'
Andrew Harding describes the atmosphere in Zimbabwe amid the uncertainty around President Mugabe's future.
Regional leaders to hold Zimbabwe crisis talks as Mugabe detained
Southern African heads of state to discuss military’s seizure of power